SumoMe: Tungamira Chizvarwa cheSiti Yako ... neRutsigiro Rukuru | Martech Zone
SumoMe: Tungamira Chizvarwa cheSiti Yako ... neRutsigiro Rukuru
Mugovera, Kukadzi 21, 2015 Muvhuro, Ndira 4, 2021 Sean Sullivan
Ini ndanga ndichangobva kuverenga Jeff Goins 'webhusaiti uye ndikacherekedza mashoma emubatanidzwa andanga ndisati ndaziva neyake saiti yeWordPress. Ini ndaishandisa WordPress Musoro Kutsvaga kuita tsvakiridzo. Jeff anoshandisa plugin inonzi SumoMe yakagadzirwa AppSumo. Pandakatarisa ese maficha eSumoMe, ndakafadzwa.
Ini ndaive nemimwe mibvunzo maererano nema plugins uye timu yeSumoMe yakapindura ndokupindura yese iyoyo zuva rimwe chete. Izvo zvakanaka kuti uone iyo mhando yekutarisisa inoshandiswa kune chikuva vatengi vatengi.
SumoMe yakagadzira yakakura chigadzirwa kuputsika uye inogona kuiswa pane akawanda zvemukati manejimendi manejimendi system. Iyo huru kambani inotarisa ndeye webhusaiti inotungamira chizvarwa. Iyo kambani inotenda mune yakanangana nekukanganisa. Rega ndimboputsa zvigadzirwa zveSumoMe.
Smart Bhawa, Ronga Rakavakwa uye Mupumburu Bhokisigadzira eNewsletter kusaina kunotora zvakapusa uye zvisingaoneki. SumoMe yatopa vatengi zvipupuriro nezvekuratidza mari chaiyo inotungamira traction.
Inotungamira batsira kuvaka yako email yekudonha mishandirapamwe nekupa zvinokurudzira.
Zvemukati Zvekuongorora uye Mamepu eheat ipa kupi uye sei vashanyi vanoona yakananga mapeji pane yako saiti. Uye iwe unogona kugadzirisa mishandirapamwe nekudzvanya kamwe chete.
mugove zvemagariro pawebhusaiti yako ine desktop uye nharembozha Izvi zvinosanganisira zvakare kugovana zvemukati ne highlighter uye Mufananidzo Mugovanisi.
Contact Form inopa nzira iri nyore yekutaurirana nekambani.
SumoMe inopa zvirongwa zvakawanda, zvinoenderana nezvinodiwa uye bhajeti, kusanganisira Mumwe nemumwe, akasungwa uye Pro. Dzidza zvimwe sei SumoMe yeAppSumo Anwendung akaita mafungu.
Maitiro ekuisa iyo SumoMe WordPress Plugin
Kana iwe uri paWordPress, kumisikidza kuri nyore sezvo SumoMe yatogadzira plugin inogona kutorwa uye kuiswa. Heano maitiro:
Tags: contact formszvemukati analyticsdonhwe mushandirapamwemfanhamufananidzo mugovemutungamiri wechizvarwalist anovakascroll boxsmart barsocial sharingsumo.mesumome
Sean Sullivan anotambirwa pa Shandura Kofi. Kana iye asiri podcasting, unogona kuwana Sean pamasaiti enetiweki, zviitiko zvetsika, uye zvitoro zvekofi achitora mafirimu akawandisa.
Matanho manomwe Ari Kuchinja Nhare mbozha
Maitiro Ekunze Ekushambadzira Anoyera Sei?